Ngabe Umbhalisi Wakho Angakunqamula? | Martech Zone
Ngokwenza okukhulu mayelana nokukhanselwa kweGoDaddy yikhasimende (manje elinomkhankaso walo: NoDaddy.com), nginqume ukubheka abanye ababhalisi, kufaka phakathi nabami, ukubona ukuthi bangadonsa ipulaki kalula njengoba kwenza uGoadaddy. Empeleni uzomangala, ababhalisi abambalwa kuphela abanemigomo yesevisi ebeka izidingo ezithile eziqinile ngokumelene ukwesulwa:
Ukumiswa kwesizinda se-16.2, ukukhansela noma ukudlulisa. Uyavuma futhi uyavuma ukuthi ukubhaliswa kwesizinda sakho kungamiswa, kukhanselwe noma kudluliswe (ukwesulwa noma ukudluliswa ngokuhlanganyela okubizwa ngokuthi, “Ukukhansela”) (a) ukulungisa amaphutha abakwaDotster, Inc., omunye umbhalisi, noma uMlawuli weRegistry ekuphatheni igama noma (b) lokuxazululwa kwezingxabano eziphathelene nesizinda ngokuya ngenqubomgomo noma inqubo ye-ICANN. Uyavuma futhi ukuthi iDotster, Inc. izoba nelungelo layo uqobo ukumisa okwesikhashana, ukukhansela, ukudlulisa noma ukuguqula okunye ukubhaliswa kwesizinda kuze kube yisaziso sangaphambi kwezinsuku eziyisikhombisa (7) zekhalenda nangemva kwesikhathi esinjengoDotster, Inc. umyalelo oqinisekiswe kahle ovela enkantolo yamandla afanele, noma umklomelo wokulamula, odinga ukumiswa, ukukhanselwa, ukudluliswa noma ukuguqulwa kokubhaliswa kwesizinda.
ISIVIVINYO: Ngingumbhalisi obhalisiwe weDotster kodwa futhi ngingumuntu othanda inkonzo yabo. Ngibuyekeze amakhono abo amanje futhi ngathola lokhu okukhethekile kulobubusuku engingakudlulisela kubafundi bami:
Dlulisela isizinda sakho ku-Dotster bese ukhokha u- $ 8.99 nje ukuvuselela isizinda sakho unyaka owengeziwe. Chofoza lapha
AKUFAKANISIWE KWEZINKONZO: Ngaphandle komkhawulo, okulandelayo akufakiwe Emisebenzini: Asikwazi futhi asibheki ukubona ukuthi amagama wesizinda owakhethayo, noma ukusetshenziswa kwamagama wesizinda, noma amanye amaSevisi, ephula amalungelo abanye asemthethweni. Kungumsebenzi wakho ukwazi ukuthi amagama noma amagama owakhethayo noma owasebenzisayo aphula amalungelo abanye asemthethweni noma cha. Singase siyalwe yinkantolo ukukhansela, ukuguqula, noma ukudlulisa igama lakho lesizinda; kungumsebenzi wakho ukubhala imininingwane efanele yokuxhumana ngokuhambisana ne-akhawunti yakho kanye nokuxhumana nabamangaleli, labo abangaba ngamacala, kanye neziphathimandla zikahulumeni. Akuwona umthwalo wethu ukudlulisela kuwe imiyalo yenkantolo noma okunye ukuxhumana. Sizohambisana nemiyalo yenkantolo ngaphandle kokuthi uxhumane nathi ukuphikisana nomyalelo.
Uyavuma futhi uyavuma ukuthi i-Regista.com ingamisa okwesikhashana, ikhansele, idlulise noma iguqule ukusebenzisa kwakho Izinsizakalo nganoma yisiphi isikhathi, nganoma yisiphi isizathu, ngokubona kukaRegista.com futhi ngaphandle kwesaziso kuwe.
10. Umkhawulo Wezikweletu. Ngokungeziwe kokunye ukukhawulelwa kwesikweletu okuqukethwe lapha, uyavuma ukuthi i-Network Solutions ngeke ibe nesibopho sanoma iluphi uhlobo nganoma yikuphi ukulahlekelwa noma isikweletu esivela ekusetshenzisweni kwezicelo zokubhaliswa yi-.TW Registry kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo, ikhono lakho noma ukungakwazi ukuthola igama elithile lesizinda. I-Network Solutions ayithathi cala nganoma yisiphi isicelo sokubhalisa noma ukwenqatshwa kwegama lesizinda, ukumiswa, ukusulwa, ukususwa, ukuphazamiseka noma ukudluliswa ngenxa yezinqubo, imithetho noma izinqubomgomo ze-.TW Registry, TWNIC, noma ngenxa yemikhuba, amasiko noma ukubandlulula kwezinkantolo ze umthetho noma impikiswano yokuxazulula abaxazululi. Asinacala nganoma yisiphi isimangalo, umonakalo noma ukulimala okuvela ngokuqedwa kwezinsizakalo ezinikezwa yi-.TW Registry nganoma yisiphi isizathu, kufaka phakathi kepha kungagcini ngokuqedwa kwegunya lokubhalisa le-.TW Registry, noma ukuqothuka kwalo.
I-AT & T Yahoo!
5.3 Ukunqanyulwa yi-AT & T Yahoo!
I-AT & T Yahoo! ingaqeda le Migomo nganoma yisiphi isikhathi lapho ikwazisa. Ngaphandle kwanoma yini ephikisana nalokhu, i-AT & T Yahoo! kungenzeka futhi, kepha ayinasibopho sokumisa ngokushesha noma ukumisa isevisi yakho, ukunqamula ukufinyelela kwakho ne-password, isuse i-Service yakho ku-AT & T Yahoo! amaseva, noma susa noma yikuphi okuqukethwe ngaphakathi kwensizakalo, uma i-AT & T Yahoo! uphetha, ngokubona kwakhe, ukuthi (a) wephule, wephula, noma wenza ngokungahambisani nencwadi nomoya wale Migomo, kufaka phakathi noma iyiphi i-AT & T Yahoo! esebenzayo Inqubomgomo noma yimuphi umthetho osebenzayo noma umthethonqubo; (b) unikeze ulwazi olungamanga njengengxenye yoLwazi lwe-Akhawunti yakho; (c) benza imisebenzi yokukhwabanisa noma engekho emthethweni noma ukuthengisa izimpahla noma izinsizakalo ezingekho emthethweni noma eziyingozi; noma (d) benza imisebenzi noma ukuthengisa okungalimaza amalungelo noma idumela le-AT & T Yahoo! noma abanye (ngamunye “Ukunqanyulwa Kwesizathu”). Noma yikuphi ukuqedwa kwesizathu yi-AT & T Yahoo! kuzoqala ukusebenza ngokushesha, futhi Uyavuma ngokusobala ukuthi Ngeke ube nethuba lokwelapha. Uma i-AT & T Yahoo! yakho I-ID inqanyulwa nganoma yisiphi isizathu, le Migomo nokufinyelela kwakho Insizakalo nakho kuzonqanyulwa. Ngokwengeziwe, uma Ubhalise igama elisha lesizinda ngokuhlanganyela Nensizakalo Yakho, ne-AT & T Yahoo! inqamula insizakalo yakho ngenxa yokunqanyulwa kwesizathu, bese i-AT & T Yahoo! uyaligodla ilungelo lokucela umhlinzeki wegama lesizinda ukuthi asuse igama lesizinda ebhukwini legama lesizinda kanye / noma adlulise igama lesizinda kusuka kuwe liye ku-AT & T Yahoo! Uyavuma ukuthi lapho i-AT & T Yahoo! idlulisela lelo gama lesizinda ku-AT & T Yahoo! ngaphansi kwalesi Sigaba 5.3, AT & T Yahoo! izobamba wonke amalungelo ophethe igama lesizinda elibhalisiwe maqondana nalelo gama lesizinda, kufaka phakathi ilungelo lokuthengisa igama lesizinda kumuntu wesithathu (lapho leli bekuyilungelo eligcinwe nguwe njengombhalisi wokuqala maqondana negama lesizinda elifanele) .
6.5 Sigcina ilungelo, ngokubona kwethu, ukumisa okwesikhashana noma ukunqamula ukufinyelela kwakho kwiwebhusayithi yethu kanye nezinsizakalo ezihlobene nayo noma enye ingxenye yayo, nganoma yisiphi isikhathi, ngaphandle kwesaziso. Sizonqamula noma yikuphi ukwephula imigomo yethu yesevisi noma noma yimuphi umsebenzi owenza ukusetshenziswa okungekho emthethweni noma okungavunyelwe njengoba kuchaziwe lapha.
Uma Uthenge Izinsizakalo, iGo Gody ayinaso isibopho sokuqapha Ukusebenzisa kwakho Izinsizakalo. IGoogle Daddy inelungelo lokubuyekeza ukusebenzisa kwakho Izinsizakalo nokukhansela Izinsizakalo ngokubona kwayo. IGoaddy inelungelo lokunqamula ukufinyelela kwakho Ezinsizakalweni nganoma yisiphi isikhathi, ngaphandle kwesaziso, nganoma yisiphi isizathu.
Angiyena ummeli, ngakho angeluleki noma ngubani ukuthi kufanele abhalise izizinda zakhe kubani. Nginesiqiniseko sokuthi ukubhaliswa ngokusemthethweni engikuthole kuluhlaza kuhle nokuthi okuphuzi kubi. Imigomo yesevisi ethi bangayilahla insiza yakho ngaphandle kwesaziso, ngaphandle kwesaziso esincane… Gcina igama lakho lesizinda liyangethusa ukungikhipha !!!
QAPHELA: Ekubuyekezeni imigomo yesizinda seGoogle, kubonakala sengathi basebenzisa iGoDaddy noma i-eNom… kepha angikwazi ukusho ukuthi iyiphi noma kanjani. Ukudalulwa Okugcwele: Ngidale ilogo yeNoDaddy. Nginokumaketha okubambisene neCommission Junction futhi ngigunyaziwe ukuthumela ukumaketha kokusebenzisana kwabo bobabili uDotster noGoDaddy. Eqinisweni, uzobona omunye wezikhangiso zeGoDaddy kuleli khasi! Angitholanga ukuyikhetha.
Tags: e & tdomainumbhali wesizindaichashazienomgodaddysifisomydomain.comizixazululo zenethiwekhinodaddyirejista.comyahoo
Jun 11, 2007 ku-11: 12 PM
Akunazinkinga ngombhalisi wami wesizinda GoDaddy, okwamanje.